© Medeshi News: Somaliland- HRC calls on the government to release journalist Abdimalik Mouse Oldoon
Somaliland- HRC calls on the government to release journalist Abdimalik Mouse Oldoon
Xarunta Xuquuqal Insaanka: Dawladdu waa inay xorriyadiisa u soo celiso suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysaa dawladda Somaliland inay xorriyadiisa u soo celiso suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon oo xidhan tan iyo 15kii February kadib markii dawladdu ku eedaysay inuu taageeray oo u ololeeyay murashax madaxwayne ka tartamay Somalia.
Cabdimaalik waxa la xidhay kadib markii uu safar kaga soo noqday magaalada Muqdisho ee dalka Somalia. 18kii February ayay Maxkamadda Gobolka Hargeysa rumaan garaysay todob cisho. Markii ay dhamaatay todobadii cisho waxa dib loo horkeenay Maxkamadda 26kii February iyada oo todobo cisho oo kale loo diray xabsi ku hayn. Kadib dib looguma soo celin maxkamadda.
Booliisku waxaay ku eedeeyeen Cabdimaalik inuu ku kacay hawlo ka dhan ah qaranka iyo faafin warar been abuur ah.
Eedda loo haysto Cabdimaalik waxaay salka ku haysaa aragti uu soo dhigay bartiisa Facebook ga. Xorriyadda hadalka iyo cabiradadda aragtida waxa damaanad qaaday dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland.
Ma aha inay Somaliland ka cadhooto aragti kasta oo ka duwan midda ay aaminsan tahay. Waa in loo ogolaaado inay dadku cabiri karaan aragtidooda iyaga oo aan cabsi ka qabin in dhibaato ka soo gaadho.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ka codsanaysaa dawlada Somaliland inay xorriyadiisa u soo celiso Cabdimaalik Muuse Coldoon.